Muqdisho: 20 wasaaradood oo xisaabiyaal loo magacaabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta xisaabiyeyaal u magacawday qaar ka mid ah Wasaaradaha dowladda, kuwaasi oo tababar loogu soo gabo gabeeyay magaalada Muqdisho.
Siminaarkan loo soo gabo gabeeyay shaqaalo ka tirsan Wasaarada Maaliyadda ee Xukuumadda Soomaaliya, islamarkaana uu soo qaban qaabiyay xafiiska Xisaabiyaha guud ee dowladda ayaa ku saabsanaa la shaqeynta wasaaradaha dowladda, iyadoo xafladdii lagu soo gabo gabeynayay siminaarka ay ka qeyb galeen, Wasiir ku-xigeenka Wasaarada Maaliyadda, Xisaabiyaha guud, Hanti dhowrka iyo Shaqaalaha Wasaaradda, waxaana shaqaalaha tababarka loo soo gab gabeeyay ay tiradoodu gaaraysay 20 qof.
Ugu horeyn goobta waxaa hadal ka jeediyay Xisaabiyaha guud ee dowladda Mudane Axmed Yuusuf Muumin (Siraaji) waxana uu sheegay in shaqaalahan tababarka loo soo gabo gabeeyay ay u magacaabeen 20- Wasaaradood, isagoo ugu baaqay mas’uuliyiinta hay’adaha ay ku shaqaalahan ku magacaabanyihiin inay gacan ku sii yaan gudashada waajibaadkooda.
“Shaqaalahan waxa ay qeyb ka qaadanayaan habsami u socodka daqliga iyo maamul wanaaga, sida aad ogtihiin Marxaladdii KMG ahayd waan ka gudubnay, marka 20-kan qof waxa ay ka howlgalayaan 20 Wasaaradood oo aan u magacaawnay” ayuu yiri Xisaabiyaha guud.
Prof. Nuur Jimcaale Faarax oo ah Madaxa xafiiska hanti dhowrka Qaranka oo isna goobta ka hadlay ayaa kula dar daarmay shaqaalaha loo xilsaaray kala shaqeynta Wasaaradaha dhanka Miisaaniyadda in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday, isagoo xusay in tani ay qeyb ka tahay la xisaabtanka hay’adaha dowladda.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda ee Xukumadda Soomaaliya, Fahmo Axmed Nuur oo soo xirtay xafladda ayaa sheegtay in tababarkan uu lafdhabar u yahay hanaanka xisaabaadka iyo Maaliyadda ee dalka, waxaana ay ku boorisay inay si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan maadaama xisaabiyaha uu yahay lafdhabarka dhaqaalaha dalka.
“Waxaan idinkula dar daarmayaa in aad ka soo dhalaashaan howsha qaran ee la idin igmaday, islamarkaana aad si daacadnimo ah ugu shaqeysaan bulshadiina” ayay tiri Marwo Fahmo.
Xisaabiyeyaashan loo soo magacaabay 20-ka Wasaaradood oo ka mid ah hay’adaha dowladda ayaa waxa ay qeyb tahay sidii loo xoojin lahaa uruurrinta daqliga iyo la xisaabtanka hay’adaha dowladda.
Askar tababar xirfad kororsi looga furay xerada Jaziira ee Muqdisho